कुन राशि हुने मानिसको कति वर्षमा भाग्य चम्किन्छ ? – Complete Nepali News Portal
कुन राशि हुने मानिसको कति वर्षमा भाग्य चम्किन्छ ?
July 30, 2017	4,437 Views
पोखरा । भृगु संहितामा उल्लेख गरिएको छ की कुण्डलीको पहिलो भावको स्थितीबाट भाग्योदयका बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ । कथमकदाचित् तपाईंको भाग्य चम्किाहाल्यो भने पनि कुण्डलीले त्यसलाई लुकाउन सक्दैन । कारण तपाईंको राशी अनुसार पनि भाग्योदयको फल जान्न सकिन्छ ।
भृगु संहितामा उल्लेख गरिएको छ की कुण्डलीको पहिलो भावको स्थितीबाट भाग्योदयका बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ । कथमकदाचित् तपाईंको भाग्य चम्किाहाल्यो भने पनि कुण्डलीले त्यसलाई लुकाउन सक्दैन । कारण तपाईंको राशी अनुसार पनि भाग्योदयको फल जान्न सकिन्छ ।